Taariikhda (Siirada) Nabi Maxammed (NNKH) Qaybtii 1aad - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Taariikhda (Siirada) Nabi Maxammed (NNKH) Qaybtii 1aad
1.| Safarkiisa Bilaad Shaam iyo Guurkii Khadiija
Markuu Muxammad gaaray 12jir, isaga iyo adeerkiis waxey u safreen iney ka ganacsadaan Bilaad Shaam, haddaba; Safarkaas iyagoo ku jira waxey la kulmeen Nin la yiraahdo Al-Raahib Buxeyrah oo daganaa Madiina Busra.
Al-Raahib waxaa galay dareen markuu arkay Muxammad, isagoo uu ka dareemay Sifaat uu ku arkay Kitaabka la yiraahdo (Ahlul Kitaab), iyo wixii laga yiri Muxammad Sifaatkiisa. Al-Raahib dadkii ayuu u sheegay, waxeyna yiraahdeen Al-Raahiboow sidee ku ogaatay? wuxuu yiri: Markaad ka soo laabateen Caqabada Waxba kama harin Geedihii iyo Dhagxaantii ilaa Qaara saajidan, kuwaasina uma sujuudaan ilaa Hal nabi maahee. Sidaasi ayaan ku ogaaday Wiilkaan inuu yahay Nabiyaasha kii u dambeeyey.
Abuu Taalib wuxuu mar kasta uu Muxammad uga digi jiray iney isla aadin Ardi Ruum, isagoo uga baqaayey in la dilo.
Abuu Taalib wuxuu Muxammad u celiyey Makkah, ka dib ayuu Abuu Taalib u soo laabtay Ardi Shaam, oo ay joogtay Khadiija Bint Quweylad iyo Wiilkeeda (Meysar), sidaasi darteed Abuu Taalib Khadiija wuxuu u aqbaaray wixii ay la soo kulmeen Isaga iyo Muxammad, ka dib Khadiija waxey damacday iney Muxammad Guursato.
Abuu Taalib markuu soo laabtay ayuu Muxammad u aqbaaray iney Khadiija ay rabto, Muxammadna wuu ka aqbalay, wuuna guursaday, da’diisuna waxey aheyd 25jir, iyadana waxey jirtay 40sanno, horeyna waxey u soo guursatay Labo nin, mid waxey u dhashay Gabar iyo Wiil, midka kalena Hal Gabar.
Ugu horeyn Malakul Jibriil ayaa wuxuu u soo dejiyey Suuratul Calaq, bishii Ramadaan ee Sannadkii 40aad ee Muxuammad dhalshadiisa, waxaana loogu soo dejiyey meesha la yiraahdo Gaaral-xera, Muxammad isagoo cabsanaayo ayuu u soo noqday Gurigiisa, Khadiija buste ayey ku duubtay, waxeyna u keentay nin ay Khadiijo ay ilmo habreed yihiin oo la yiraahdo Warqah Ibnu Nowfal, wuxuuna u sheegay inuu Muxammad noqon doono Nabiga Ummadaan.
Ibnu Noofal wuxuu jeclaa inuu ahaado nin dhalin yaro ah oo xoog leh si uu ugu gargaaro Nabiga, ka dib Nabiga waxaa loo soo dejiyey Suuratul Mudathir, markaas ayuu Ilaah ku amray inuu Qoomkiisa ugu yeero Islaamnimada. Qofka ugu hareeyey ee nabiga rumeeyana wuxuu noqday Abuubakar, Naagahana waxaa ugu horeesay Xaaskiisa Khadiijo, Wiilashana waxaa ugu horeeyey Ina adeerkiis Cali bin Abii Taalib, adoomadana waxaa ugu horeeyey Zeen Binu Xaarith.
Waxaana ku islaamay:
Cusmaan Bib Cafaan
Sacad bin abii waqaas
Cabduraxmaan Bin Coof
Cusmaan Bin Madcuun
Abuu Salama Bin Cabdul asad
Al-Aqram Ibn Abil Aqram
Rasuulka iyo Asxaabtiisa waxey ku kulmi jireen Sir ahaan Guriga Al-Aqram Ibnu Abil Aqram, Sirtiida halkaas ayey isugu Kulmi jireen, ilaa Saddex sanadood ayey sidaas ahaayeen, ka dib waxey Dacwada Rasuulka u wareegatay ilaa Al jahar, badbaadin uu badbaadinaayo Amarka ilaaheey.
La Sooco Qaybaha Danbe Ee Shabakadda Wargane
Nabi Muxammad csw
Rasuulka iyo Asxaabtiisa